Dzidza nezvenhoroondo yeZuva reBhuku uye nei ichipembererwa musi waApril 23 | Zvazvino Zvinyorwa
Encarni Arcoya | | Nhoroondo yezvinyorwa
Gore rega rega zuva rebhuku iri rinopembererwa musi waApril 23. Iri izuva umo zvitoro zvakawanda zvemabhuku zvinopa zvikwereti uye zvinoronga zviitiko zvakawanda zvine chekuita nemabhuku.
Zvisinei, zuva rebhuku rine mavambo, sezvo isina kumbopembererwa kubvira nariini. Kana iwe uchida kuziva kuti chii uye nei ichipembererwa zuva irori uye kunaani zvine chikwereti kuti kune rakadai zuva, saka verenga kuti uwane.
1 Kwakatangira zuva rebhuku
1.1 Ndiani akasika zuva rebhuku?
2 Nei 23 Kubvumbi yakasarudzwa?
Kwakatangira zuva rebhuku
Zuva rebhuku nderekurangarira kusimudzirwa kwekuverenga, kugadzirwa kwenyaya uyezve kuchengetedzwa kwepfuma yenjere. zvese izvi zvine chekuita nebhuku uye rakapembererwa nenzira iyoyo kwemakore mazhinji. Zvisinei, iwe unoziva here kuti yakabva kupi?
Vanhu vazhinji havazive kuti iyo inopembererwa Yepasi rose Bhuku reBhuku rakakonzerwa nemuSpanish. Hongu, chaizvo. Mhemberero iyi yakatanga kubva pane zvakataurwa kubva kuSpain uye haina kusvika makore akazotevera, muna 1988, apo UNESCO yakafunga kuti ichave mhemberero yepasi rese. Muchokwadi, yakanga isiri kusvika 1989 kuti yakatanga kupembererwa mune dzimwe nyika, asi zvakazoitika kuSpain uye yanga ichingozviita kwenguva yakati rebei.
Ndiani akasika zuva rebhuku?
Chero pese panonzi musi waApril 23 ndiro zuva rebhuku, chikonzero nei richipembererwa musi iwoyo kwete pane mumwe rinofungidzirwa. Uye kunyangwe ndichizopindura uyu mubvunzo muchikamu chinotevera, ndinoda kuti iwe uzive chinhu chinozivikanwa nevashoma: ndiani aive musiki wezuva rebhuku?
Nekuti hongu, paive nemunhu aida kupa zuva rebhuku "zuva raro", iyo nguva apo vanhu vazhinji vakapedzisira vaine bhuku mumaoko avo. Y Munhu iyeye aive Vicente Clavel Andrés. Ndiye aive muvambi wezuva rebhuku.
Vicente akagadzira Edhisheni Cervantes muna 1916 muValencia. Kunze kwekuve mupepeti, aive mutori venhau, munyori uye muturikiri. Mumakore maviri, akaendesa imba yekutsikisa kuRambla muBarcelona, ​​nzvimbo yakakosha kwaakatanga kusangana nevazivi veguta uye ndokuva shamwari nevazhinji vavo. Uye zvakare, iwo mabhuku aanoburitsa anokwezva kutariswa, senge iwo aJosé Enrique Rodó.
Muna 1923 akagadzwa kuve mutevedzeri wemutungamiri weChristian Chamber yeBhuku reBarcelona. Uye ipapo anotanga kutaura kuti bhuku rive nezuva rekupemberera. Akazviita kaviri, gore rimwe chete raakagadzwa uye muna 1925. Ndipo pazano repiri rekuti akawana Alfonso XIII kusaina Royal Chirevo uko kwakasimbiswa kuti kwaizove neSpanish Book Mutambo.
Ehe, haina kupembererwa musi waApril 23, asi kubva 1926 kusvika 1930 yaipembererwa musi waGumiguru 7, kunova kuzvarwa kwaCervantes. Uye, ipapo zvakazopfuudzwa kune iro razvino zuva risina kufamba kunze kwezviitiko zvishoma, kungave nekuda kweHondo yeVanhu, kana netsaona neVhiki Dzvene.
Muna 1995 pakange paine chimwe chirongwa chakabuda muGeneral Musangano weUNESCO, muParis, uko zvakatemwa zivisa musi waApril 23 se "World Book uye Copyright Day", yava kunzi International Book Day. Muchokwadi, mune dzinenge nyika dzese inopembererwa zuva iri, kunyangwe paine vamwe vasingabvumirani.
Semuenzaniso, panyaya yeIreland kana United Kingdom, kupemberera kwayo ndiChina chekutanga munaKurume (pasina musi wakatarwa) uye ikoko vanoitumidza kuti World Book Day. Imwe nyika inoipemberera pane rimwe zuva iUruguay. Vakafunga kuti Chivabvu 26 raive zuva rakanakisa rekuvapo pakagadzirwa raibhurari yeruzhinji yenyika yekutanga. Kana iyo nyaya yeParaguay, iyo inopemberera Zuva reBhuku muna Chikumi 25.
Muna 2001, UNESCO yakatanga gore negore kusarudza bhuku guru renyika, nzira yekutsigira indasitiri yemabhuku asi zvakare inosimudzira tsika nemagariro ekudzivirira. Yekutanga, muna 2001, yaive Madrid. Uye gore rino 2020 yaive Kuala Lumpur (Malaysia).
Nei 23 Kubvumbi yakasarudzwa?
Sezvandakambokuudza kare, zuva rebhuku rakapembererwa muna Gumiguru 7, mumatsutso. Asi makore gare gare yakachinjirwa kuna Kubvumbi 23.
Chaizvoizvo, chimwe chezvikonzero nei zuva rakashandurwa chaive padanho remamiriro ekunze. Ramba uchifunga kuti muna Gumiguru mamiriro ekunze anogona kunge asiri akanaka. Iko kune mukana wakawanda wekuti kutonhora nemvura kuchapfurikidza kupemberera, uye panenge paine mashoma kutengesa. Chimwe chikonzero ndechekuti paive nekusahadzika kwakawanda pamusoro peiyo chaiyo zuva iro Cervantes akazvarwa. Muchokwadi, hazvizivikanwe zvechokwadi, kunyangwe iyo inonzwika zvakanyanya ndeyeya Gumiguru 7. Asi hapana munhu aigona zvechokwadi kuvimbisa iyo data.
Naizvozvo, mamwe mazuva akafungidzirwa. Uye sezvo kuberekwa kwaCervantes kwainge kwafungidzirwa kugadzirisa kwekutanga, vakasarudza kutungamirirwa nezuva rekufa kwake. Nekudaro, ivo vakakanganisa muzvidimbu zviviri zveruzivo:
Kune rimwe divi, nekuti pakanga paine nyonganiso nemisi. Nekuti Miguel de Cervantes Saavedra haana kufa musi waApril 23, asi musi waApril 22 Musi wa1616 akavigwa. Naizvozvo, iko kutove nekusawirirana.
Uye zvakare, uye sekukanganisa kwechipiri, zvinonzi ivo vaviri Cervantes (mumwe wevanyori vakuru veSpain) naShakespeare (mumwe wevakuru veUnited Kingdom) vakafa musi mumwe chete iwoyo. Izvo zvakare kukanganisa. William Shakespeare akafa musi waApril 23 wekarenda yaJulian. MuSpain iyo Gregorian yakashandiswa, zvaizoratidza kuti zuva rake rekufa raive Chivabvu 3, 1616.
Naizvozvo, izvo zvakagara zvichionekwa sezuva rebhuku, iro rinopembererwa kurangarira kufa kwevanyori vakuru vaviri vakafa pazuva rimwe chete, kukundikana.
Kunyangwe zvakadaro, izvo hazvitadzise mamwe mazita evanyori vakuru avo vakazvarwa kana kufa musi waApril 23 kubva kupihwa. Mazita saInca Garcilaso de la Vega, Vladimir Nabokov, Teresa de la Parra, James Patrick Donleavy, Josep Pla, Maurice Druon, Manuel Mejía Vallejo, Karin Boye ... vari vanyori vakura uye pasina mubvunzo vanofanirwa kuzivikanwa pazuva iri. Uye ndezvekuti, dzimwe nguva, zvinofanirwa kurangarira vamwe vanhu vanokwanisa kugadzira nyaya nepfungwa dzavo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Nhoroondo yezvinyorwa » Nhoroondo yeZuva reBhuku